Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » ATB: Mar dambe looma dagaallamo ka -badbaada Dalxiiska Afrika
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wtn
Afrika waa qaaradda ugu tirada badan waddammada madaxbannaan. Dalal badan waxay ku tiirsan yihiin waaxda socdaalka iyo dalxiiska si ay u helaan lacagaha qalaad.
COVID-19 wuxuu ku qasbay qaybaha socdaalka jilbaha.
Maanta Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska ee Afrika ayaa adduunka u gudbiya liiska rabitaanka Afrika ee Maalinta Dalxiiska Adduunka.
A Farriinta Maalinta Dalxiiska Adduunka oo ka socota Alain St.Ange, Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika ujeeddadiisu tahay United Afrika halganka ay ugu jirto inay ka badbaado waxa cudurka faafa ee COVID uu ku sameynayo warshadaha safarka iyo dalxiiska.
27 -ka Sebtember waa Maalinta Dalxiiska Adduunka iyo fursad weyn oo loogu talagalay qof kasta oo noloshiisa ku tiirsan dalxiiska inuu ka fiirsado warshadiisa.
"Markaan u idhaahdo Maalin Dalxiis Farxad leh qof kasta oo wakiil ka ah Guddiga Dalxiiska Afrika, waxaan sidoo kale hoos u dhigayaa xaaladda ay warshadeena muhiimka ahi ku jirto" ayuu yiri Madaxweynaha ATB St.Ange.
Qaarkood waxay u dabaaldegi doonaan halku-dhig ama weedh, laakiin sidee ayay weedhahani u beddelaan nolosha dhammaan kuwa wajahaya caqabadaha waaweyn xilligan cusub ee caadiga ah ee dalxiiska.
Dunida dalxiisku waxay u baahan tahay cod, waxaan u baahanahay si ka badan sidii hore hoggaanka si uu noogu hoggaamiyo annaga oo gacmaha is haysanna markaan ka gudubnay baalashaan mugdiga ah. Waxaan u baahanahay aragti si ay warshadeenu u ahaato mid ku habboon waxaanan u baahanahay midnimo sidii hore oo kale ”ayuu yiri Alain St.
Maalinta Dalxiiska Adduunka Mr. St. Ange wuxuu xiran yahay midab buluug ah oo ka tarjumaya badweynta buluugga ah, samada buluugga ah iyo mustaqbal qorrax leh oo ifaya u ah dunida dalxiiska, iyo Afrika.
Maalgashiga dalxiiska ee dad aad u badan ayaa maanta loo arkaa halis, shaqooyinka dalxiiska ayaa yimaada oo aan la hubin inta ay soconayaan iyo tan maadaama suuqyada ilaha dalxiiska ee muhiimka ahi ay ciyaaraan kala -saaridda midabka leh ee waddamada halista ah maadaama dalalkaas kuwa ugu nugul u dagaallamayaan inay helaan xitaa qiyaasta koowaad ee tallaalka Covid-19 ee dadkooda.
Adduunyadu waxay ka gudubtay inay noqoto hal adduun oo kaliya oo ay u gudubto xaalad qof walba u halgamayo badbaadadiisa naftiisa isagoo illoobaya isku -xirnaan daciif ah oo ku jira silsiladda barroosinka oo kaliya ayaa burburin doonta markabkii ay ku xidhnayd.
Guddiga Dalxiiska Afrika wuxuu ku salaysan yahay Boqortooyada Eswatini wuxuuna leeyahay hal hadaf. Tani waa inay Afrika ka dhigto meesha loogu jecel yahay safarka adduunka.
Macluumaad dheeraad ah: www.africantourismboard.com
Midnimada iyo muuqashada waa in wax laga qabtaa sida midda oo kale annagoo ka go'an soo nooleynta dalxiiska.
Maalinta Dalxiiska Adduunka ee Farxada leh!
Saamaynta dhaqaale ee COVID-19 ku leeyahay Afrika: